Imba | MyCoolClass.com
Tsvaga mudzidzisi akakwana kuti akubatsire kukudziridza hunyanzvi hwekubudirira
MyCoolClass.com ndeye mudzidzisi-anowanikwa chaiwo kudzidza chikuva. Kuchikoro chedu chepamhepo,
iwe unowana iye akakwana mudzidzisi kuti akupe iwe neyakanakisa wega kudzidza kwako ruzivo.
Isu tinokubatsira iwe kuzadzisa chinangwa chako - chako kana nyanzvi. Kudzidza mutauro?
Unoda kudzidziswa kuchikoro kana kuyunivhesiti? Unoda kuridza chiridzwa here?
MyCoolClass.com ine inotonhorera kirasi yako chete!
Isu tinobatanidza vadzidzisi vakanakisa vanobva kutenderera pasirese nevadzidzi vanofarira mukunakidzwa,
yakavhurika uye ine tsika dzakasiyana nzvimbo.
Kufamba & Tsika
Gadzirira nyika inotonhorera, nyowani uye inonakidza yekudzidza!
Tiri kupedzisa kugadzirisa yedu yekufunda manejimendi system uye vadzidzisi vari kunyorera kujoina mubatanidzwa.
Isu tinoronga kushanda zvizere nekutambira kunyoresa muna Chivabvu 2021.
Yepasi rose mudzidzisi-ane chaiyo yekufunda plaform
2-12 Makore akare
Vana vachada mafaro edu, makosi edzidzo. Tine varairidzi mumutauro, masvomhu, hunyanzvi, sainzi uye nezvimwe.
12-17 Makore akare
Vechidiki vanozoita neyedu yakasarudzika uye yekugadzira makosi mune akasiyana mitauro, zvidzidzo
Makirasi Evakuru uye Makosi
Kuenderera mberi nedzidzo yevakuru kuri nyore neakanakisa evadzidzisi vezvidzidzo kubva kumativi
Kana iwe uchida kudzidza kutaura chiFrench, kunatsiridza izwi rako reChirungu, kana kuda kudzidziswa mualgebra, unogona kuwana mudzidzisi akakwana paMyCoolClass.com
MyCoolClass.com mubatanidzwa wepasi rese
yevadzidzisi. Chinangwa chedu ndechekupa kuita
uye yakasarudzika dzidzo kuvadzidzi vedu.
Isu tinoita izvi nekuvaka hukama chaihwo uye husingaperi uye nekugadzira yakasarudzika nharaunda yekudzidza
kukodzera zvaunoda iwe pachako. Sekubatira pamwe, zvatinokoshesa vadzidzi vedu nevadzidzisi,
kwete masheya purofiti.
Munhu wese anokunda!
Vese vadzidzi vedu nevadzidzisi vanogona kutaura
Zvinyorwe kune yedu Nhau!
Nyoresa tsamba redu uye uve wekutanga kuziva nezve kunyoresa kwekutanga, zvinyorwa zvechikoro, makosi matsva, mablog evadzidzisi uye dzimwe nhau dzinonakidza!
Chibvumirano cheGDPR *
Ini ndinobvuma kuve neMyCoolClass.com inochengetera ruzivo rwangu rwunotumirwa kuti ndipe kunyoreswa kune tsamba yetsamba. Ndine kodzero yekuzvinyora chero nguva nekudzvanya iyo 'kuzvinyoresa' link mune iyo email.
Terms uye Policy